अर्बपति मुकेशको जीवनशैली: उनका नोकरको तलबले नै बनाउछ च!कित ! – Online Nepalaja
February 2, 2021 103
एसियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीबारे धेरै कुराहरु बाहिर आउँदैनन् । अम्बानीका नोकरहरुका छोराछोरी पनि विदेशमा अध्यन गर्छन् । रिलायन्स इन्डस्ट्रीजका सीएमडी मुकेश अम्बानी अहिलेको समयमा विश्वकै पाँचौं धनी व्यक्ति हुन् ।
भारत सहित सिंगो एशियामा उनीसँग जति सम्पती छ त्यो अरुसँग छैन । उनी विश्वको सब भन्दा महँगो घरमा बस्छन् । यो घरको नाम एन्टिलिया हो । अम्बानीको घर मुम्बईमा रहेको छ ।उक्त घरमा ति कुराहरु उपलब्ध छन् जसको बारेमा हामी कल्पना गर्न मात्र सक्छौँ । के तपाईंलाई थाहा छ मुकेश अम्बानीको नोकरले कति तलब पाउँछन् ?
लाइभ मिररका अनुसार एन्टिलियामा काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीको तलब ३ लाख २० हजार भन्दा कम छैन ।अम्बानीका नोकरहरुले पनि प्रत्येक महिना ३ लाख २० हजार भन्दा धेरै रूपैयाँ पाउँछन् ।
Prevमेरो दुइटा बच्चा हुर्काउने उमेर शेरधनले खा’यो,मलाई मन्दिरमा देउतालाई साक्षी राखि मेरो सिउँदोमा सिन्दुर भर्नु भएको छ (भिडियो सहित)
Nextयी २२ बर्षे युवतीको फिगरले खिच्यो बिश्वको ध्यान